Nantes ayaa cabasho u dirtay FIFA iyadoo Cardiff ay seegtay lacagihii ugu horreeyay ee Sala – Walaal24 Newss
Nantes ayaa cabasho u dirtay FIFA iyadoo Cardiff ay seegtay lacagihii ugu horreeyay ee Sala
February 27, 2019	0	By walaal24
Nantes ayaa cabasho u gudbisay FIFA ka dib markii Cardiff City ay ku guuldareysatay inay bixiso lacagta ugu horeysa ee Emiliano Sala oo ah 15 milyan ginni (20 milyan oo ginni).
Kooxda Premier League ayaa u saxiixday Sala lacag rikoorka rikoorka suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, lakiin diyaarada ay weeraryahankeeda ka maqnayd ayaa ka maqnaa kanaalka Ingariiska markii uu ka soo safray Nantes kuna biiray Cardiff si uu ugu biiro asxaabtiisa cusub.
Dhimashada ciyaaryahanka ayaa markii dambe la xaqiijiyay ka dib markii laga soo riday diyaaradda burburay diyaaradda, iyada oo Sala loola cararay tan iyo markii uu ka dhacay Argentina 16-kii Febraayo.
Cardiff ayaa dib u dhigtay lacagtoodii ugu horreysay ee weeraryahanka reer Argentina Mehmet Dalman isagoo sheegay in ay jiraan “cillado” oo ku saabsan heshiiska loo baahan yahay in la baaro ka hor, taasoo keentay in Nantes ay ku hanjabaan ficil sharci ah.
“Dabcan, haddii aan qandaraaska ku qasbanahay inaan bixino markaas dabcan waan nala noqon doonaa, waxaan nahay koox sharaf leh” ayuu yiri Dalman.
“Laakiin haddii aanan aheyn – islamarkaana waxaa jira caqabado qaar – markaas waxaad ka rajeyneysaa inaan noqdo guddoomiye iyo wakiil ka ah danaha kooxdan si aan u eegno taas oo aan heyno booskeena waana sida aan sameyneyno.”
Naadiga Faransiiska ayaa markaas kadib siisay waqti dheeri ah kama dambeysta kama dambeysta ah, laakiin Cardiff ayaa u muuqata in ay bixisay lacag bixintaas.
War saxaafadeed ka soo baxday FIFA ayaa xaqiijisay in Nantes ay haatan kiiskan u gudbisay hay’ad sare.
“Waan xaqiijin karnaa inaan xalay fiidkii ka helay FC Nantes kulankii Cardiff City ee lala xiriiriyay bedelkii Emiliano Sala,” ayaa lagu yiri warbixinta.
“Waxaan raadineynaa arinta, madaama aan marnaba faahfaahin dheeraad ah ka helin marxaladaan.”
Isniintii, Cardiff waxay muujisay “walaac weyn” oo ku aaddan sharciga sharci ahaaneed ee duulimaadka ka dib markii warbixintii ku meel gaadhka ahayd lagu daabacay Laanta Howlaha Shilalka Howlaha (AAIB).
“Waxaan haynaa walaac weyn in su’aaluhu wali ka sii socdaan macquul ahaanshaha liisan darawalnimada iyo qiimeynta si ay u qaadaan safar noocan ah, sida ku cad qayaxan,” bayaanka ka soo yeeraya kooxda.
“Waxaan sidoo kale ka walaacsannahay in aan ogaanno in safarka uu ku lug lahaa diyaarad aan u hoggaansanayn UK ​​CAA ama shuruudaha FAA-da ee ganacsiga ganacsiga sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa in ay si sharci darro ah u shaqaynayeen.”
Meydka Sala ayaa ka soo kabtay burburkii laba toddobaad kadib markii diyaaradda la waayay 21-kii Janaayo. Jidhka diyaaradda diyaaradeed ee David Ibbotson, lama helin.
Ra’iisul wasaaraha XFS oo shir guddoomiyey Shirka Golaha Wasiirada oo ka qabsoomay Garoowe
Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka Labada Dal
Madaxweynaha Golaha Sare ee Sudan oo Waraaqaha Aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Cusub ee Soomaalya u fadhin doona Sudan
Milliteriga Maraykanka oo kordhinaya qalabaynta saldhigga Diyaaradaha Garoonka Balli-Doogle
Baarlamanka Dalka Itoobiya oo Maanta dooranaya Madaxweyne cusub uu Dalka yeesho
Dhageyso: Booliska,Nabad Sugidda iyo Asluubta oo la magacaabay Taliyaal cusub
Dhageyso: Gudoomiye Cali Gacal Casir oo ka jawaab ka bixiyay mooshinka laga gudbiyay
Dhageyso: Wasiirka Kalumeysiga “Dadkii Soomaaliya Badaheeda uga kalumeysan jiray si sharci daro ah oo ka soo horjeeda si sharci ah looga kaluumeysto”
Dhageyso: Madaxweyne Ku-Xigeenka DDSI Xamdi Aadan oo qirey tacaddiyii ka dhacay DDSI
Daawo: Munaasabada wejigii koowaad ee dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo la soo geba gebeyay
Daawo: Shir jaraa’id oo ay siwadajir ah u qabteen Cabduwali Gaas iyo Danjire Micheal Keating magalada Garewe